Askar ka tirsan booliska Kenya oo hubka laga qaatay iyaga daawanaya koobka horyaalada Yurub
Booliska magaalada Nandi oo ee gobolka Rift Valley ee dalka Kenya ayaa ku raad joogo koox burcad ah oo habeenimadii xalay ka xaday sadex qori.
Labo ka mid ah dableydii weerartay Hotel ku yaal Nairobi oo la aqoonsaday
Booliska Kenya ayaa aqoonsaday labo ka mid ah raggii fuliyay weerarkii Talaadadii lagu qaaday dhismaha Hotelka DusitD2 ee magaalada Nairobi, kaddib markii la soo afjaray howlgal qaatay 19 saacadood.
Kanaallada ugu waaweyn dalkaasi Kenya ayaa xiligan qarka u saaran in ay karkaaraada jabsadaan, kaddib Roobab Lixaad leh oo da’aya sida laga soo xigtay Laanqeerta Cas Kenya.
Kenya oo shaacisay magacyada iyo sawirada rag lagu tuhmayo inay ku biireen Al-shabaab
Dowladda Kenya oo sheegtay in 23 dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsanaa ku dileen gobolka Gedo 15 Shares
Howlgalo militari oo wada jir isaga kaashadeen ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayeey saraakiisha Kenya sheegeen in lagu dilay ilaa 23 ka tirsan dagaalamayaasha Al-shabaab deegaanka Faafax-Dhuun ee gobolka Gedo.
Aadan Barre Ducaale “Ninka raba inuu Nairobi ku mucaarado dowladda Farmaajo uma ogolin”.
Hoggaamiyaha Aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa u digay Siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada mucaaradka ku ah dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo inay shirar ku qabtaan magaalada Nairobi.
Shacabka Kenya oo saaka u dareeray codeynta doorashada ku celiska ah
Sagal Radio Services • News Report • October 26, 2017
Shacabka Kenya ayaa saaka u dareeray goobaha cod bixinta ee doorashada ku celiska ah ee horay u go’aamisay Maxkamadda sare ee dalka Kenya.
Sagal Radio Services • News Report • August 10, 2017
Xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa mar kale difaacday Kursiga Xildhibaano ee degmada Kamakunji, kaddib markii uu codod badan uga adkaaday Musharaxii la tartamayay.
Uhuru Kenyatta oo socdaal qarsoodi ku tagay Dhoobley, (Maka war qabtay dowladda) Sawirro
Madaxweynaha Kenya oo soo jeediyay Howlgalka Amisom in Qaramada Midoobay la hoosgeeyo
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo booqasho ku jooga dalka Germany oo shalay uu gaaray, ayaa soo jeediyay in howlgalka Midowga Afrika ee Amisom, la hoosgeeyo Qaramada Midoobay.
Kenya oo sheegtay in 53 dagaalyahan ka tirsan Al-Shabaab ku dishay howlgalo milateri
Kenya ayaa sheegtay in 53 dagaalyahan oo 10 ka mid ah ay ahaayeen saraakiil sare sare lagu dilay howl gallo milateri ka dhacay Soomaaliya, kaasoo lala beegsaday xarumo ay ka abaabulaan weerarada.
Kenya oo ka hadashay Weerar lagu qaaday Magaalada Wajeer
Sagal Radio Services • News Report • April 29, 2015
Xalay Fiidkii ayey aheyd markii Rag ka tirsan Al-shabaab ay Weerar ku qaadeen Xarunta Degmada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Barri Kenya,kuwaas oo doonayay in ay Dilaan Guddoomiyaha Degmada Wajeer Balse uu ka badbaaday.
Guddoomiyihii deegaanka Gaarisa iyo madaxda Amniga oo shaqada laga eryay
Dowladda Kenya ayaa shaqada ka joojisay Guddoomiyihii deegaanka Gaarisa Njenga Miiri iyo shan sarkaal ka tirsanaa Ciidamada Booliska.
Dadweyne careysan oo dalbaday in Shaqada laga eryo Agaasimaha Guud ee Nabad-sugidda Kenya
Baarlamaanka wadanka Kenya ayaa la gaarsiiyay codsi lagu dabanayo in shaqada laga eryo agaasimaha nabad-sugida Kenya Philip Kameru oo lagu eedeeyay inuu wax ka qaban waayay weerarkii Jaamacadda Gaarisa ee lagu dilay 148-qof.
Baroor diiq loo sameynayo dadkii ku dhintay weerarkii Gaarisa oo Kenya ka bilabatay
Dalka Kenya ayaa waxaa maanta ka bilaabanaya saddex maalmood oo baroor diiq qaran loo sameynayo dadkii ku dhintay weerarkii khamiistii la soo dhaafay lagu qaaday Jaamacadda gaarisa, halkaasoo lagu laayay ilaa 147 ruux u badnaa arday.
Ciidanka Kenya oo lagu Eedeeyay Kufsi ay u Geysteen Haween Soomaaliyeed
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Somalia ku eedeysay inay kufsi u geysteen haween iyo gabadho Soomaali ah, kuwaasoo dawooyin iyo cunno u raad-saday xeryaha ciidamadaasa ay ku leeyihiin Koonfurta Somalia.
Sirdoonka Kenya oo sheegay inay kaalin ku lahaayeen duqeyn lagu dilay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab
Sirdoonka dalka Kenya ayaa sheegay inay kaalin ku lahaayeen duqeyn khamiistii lagu dilay Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Kenya oo saakay lagu toogtay Nairobi
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Kenya oo lagu magacaabayay George Muchai ayaa subaxdnimadii hore eee saakay oo Sabti ah lagu toogtay mid ka mid ah wadooyinka waa weyn ee magaalada Nairobi, xilli uu gaari uu saarnaa
Kenya oo sheegtay in Dagaalameyaal Shabaab ah ay dishay
Warbaahinta gudaha Kenya oo soo xiganaysa saraakiil ciidamada Kenya katirsan ayaa qoray in ciidamada Kenya ay dileen ilaa 5 katirsan dagaalyahanada Xarakada A-shababab.
Ciidamada Kenya oo la wareegay Zakariye Ismaaciil, xilli la doonayay in Muqdisho loo soo dhoofiyo
Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Ciidamada Kenya ay wateen Zakariye Ismaaciil oo lagu waday in maanta loo soo dhoofiyo magaalada Muqdisho, si Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ula wareegaan.
Weerar hubeysan oo xalay lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taal magaalada Wajer
Wararka ka imaanaya magaalada Wajer ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay xalay weerar ku qaadeen goob lagu caweeyo.
Shaqaalaha Kenyanka ee aan Soomaalida aheyn oo ka qaxaya magaalada Mandhera
Boqolaal ruux oo ka shaqeynayay magaalada Mandhera ayaa bilaabay inay ka qaxaan magaalada, kadib markii sabtidii la soo dhaafay weerar dad badan ku dhinteen lagu qaaday Bas ka baxay Mandhera.
Diyaaradaha dagaalka Kenya oo goor dhow duqeeyay agagaarka magaalada Jilib
Diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa dhowr gantaal ku tuuray deegaanka Hargeysa-yarey oo ku dhow degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe, iyadoo duqeyntan ay ka mid tahay kuwo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka geysanayeen deegaano ka tirsan Gedo.
RUTO: Kenyaankii la dilay Waxaan ugu Aar-gudnay 100 ka tirsan Al-shabaab
Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya ayaa sheegay warbaahinta in toogashadii 28-kii ruux ee Kenyaan ah oo shalay ay Al-shabaab ku dishay deegaan ku dhow degmada Mandheera xilli ay u socdeen Nairobi ay ugu aargudeen in ka badan 100 dagaalyahan oo Xarakada Al-shabaab ka tirsan.
Kenya “Al-Shabaab waxay qorsheyneysaa inay dagaal diimeed ay ka dhex abuurto shacabka Kenya”
Kenya ayaa ku eedeysay Al-Shabaab inay dooneyso in dagaal diimeed ay ka abuurtooda dalkooda, kadib markii shalay dad badan ay ku dileen duleedka magaalada Mandhera ee Gobolka waqooyi bari.
Dowladda Kenya oo sheegtay in la xirayo xarumaha lagu barto diinta Islaamka
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in gabi-ahaanba la xirayo xarumaha islaamiga ah ee ku yaalla dalka ,kuwaasi oo ay dowaladdu aaminsan-tahay in dhalin-yarada lagu baro xagjirnimada,xilli ay dalka ka dhaceen weerraro khasaare badan gaystay.
Malagu guuleystay sugida Amaanka Kenya kadib weerarkii sanad ka hor ka dhacay Westgate Mall.
Ammaanka dalka Kenya ayaa si weyn loo adkeeyey maanta oo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii Ururka Al-shabaab uu weeraray dhismihii ganacsiga Westgate Mall ee magaalada Nairobi.
Sagal Radio Services • News Report • September 15, 2014
Buug cusub oo ciwaan looga dhigay (XADKA RIDDADA MAXAA KA RUN AH) isla markaasna lagu soo koobay qoraalo ka hadlaayo xadka riddada, qeexitaana ku sameynaayo ayaa shalay lagu soo bandhigay magaalada Nairobi.
Kenya oo Sheegtay inay Dowladda Soomaaliya kala hadlayso Muranka Badda
Kenya oo Hogaan Cusub u Magacowday Sirdoonkeeda
Shalay galinkii dambe waxaa magaalada Nairobi lagu dhaariyay taliyaha cusub ee hogaamin doona sirdoonka Kenya shaqada ugu badan ee uu qaban doonana waxay noqon doontaa ka hor tagista weerarada Al-Shabab ka geystaan dalka Kenya.
Booliiska Kenya oo sheegay in dilal ka dhacay Mombasa ay fulisay Al-shabaab
Booliiska Kenya ayaa sheegay in afar qof oo Keenyaan ah oo toogasho ku dilay sannadkan laba haween ah oo dalxiisyaal ahaa ay ka tirsan yihiin Xarakada Al-shabaab ee Soomaaliya.
Nin watay in ka badan 20-Baasaboor oo looga shakisan yahay in uu katirsan yahay Al-Shabaab oo la qabtay
Ciidamada Booliska wadanka Kenya ayaa sheegaya iney baaritaan ku hayaan nin looga shakisan yahay xoogaga Al-shabaab oo watay baasabooro fara badan oo kala nooc ah.
Sagal Radio Services • News Report • August 23, 2014
Somali Ministry of Information releases an undated photo of Hassan Haji Hanafi showing scars on his face. The Ministry says Hassan Hanafi went to Kenya to receive treatment following bullet injuries he sustained after military offensive by Somalia government forces and AMISOM on Buloburte town in central region of Hiran.
Deg Deg:- Wariye u Shaqeenayay Al-shabaab oo Nairobi lagu qabtay
Booliska Dalka Kenya ayaa shaaciyay in Garoonka Diyaaraha Ee Joma Kenyata lagu Qabtay Sargaal ka tirsan Al-shabaab oo lagu Magacaabo Xasan Xanafi Xaaji.
Maxkamad ku taala Nairobi oo la soo Taagayo Dhalinyaro loo qabtay Weerarkii Westgate
Maxkamad kutaala magaalda Nairobi ee dalka Kenya ayaa lagu wadaa in lasoo taago dhalin yaro Somalia ah oo lagu eedeeyay iny wax kafududeeyeen weerarkii bishii September kadhacay magaalada Nairobi ayna kudhinteen kudhawaad 67 ruux,kaa oo ay sheegteen kooxda shabab ee Somalia kadagaalanta.
Qorsho looga hortagayo Al shabaab oo kenya ay u diyaarisay Jasiirada Lamu
Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhaawaaqay mashaariic cusub oo ay dowladiisu ugu talagashay Jaziirada Lamu oo ay dhawaan ka dhacayeen weeraro Argagixiso.
Ciidanka Amaanka ee Kenya oo gacanta ku dhigay Shabaab
Ciidanka Kenya ayaa sheegay in magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari kenya ay ku xireen labo qof oo looga shakiyay in ay xiriir la lahaayeen weerarradii ka dhacay Suuqa Westgate magaalada Nairobi iyo deegaanka Mpeketoni, xilli ay doonayeen in ay ka tallaabaan xadka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya.
Faahfaahin ku saabsan meydadka Soomali laga helay Nairobi
Sagal Radio Services • News Report • July 21, 2014
Iyadoo maalin kahor laga helay halka lagu keeydiyo meydadka ee magaalada Nairobi, sedex qof oo Soomaali ah oo la dilay ayaa waxaa dilalkooda kasoo baxaya faahfaahinno dheeraad ah.
Xildhibaanno shaaciyay in Ciidamada Kenya aan laga soo saarayn Soomaaliya
Labada mudane oo ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka dalka Kenya ugu jira xisbiga talada haya ee JUBILEE ayaa ka dhawaajiyay in Kenya aysan marnaba ciidamadeeda kala soo baxayn dalka Soomaaliya.
Kooxo hubeysan oo xalay weerar ka geystay Deegaanada xeebta dalka Kenya
Inta la ogyahay shan qof oo laba ka mid ah ay ahaayeen ciidamada booliiska Kenya ayaa ku dhintay, siddeed qofna way ku dhaawacmeen weerar ay kooxo hubeysan ay xalay ku qaadeen bas gaari marayay degaanka Witu oo ka tirsan deegaanka Lamu ee dalka Kenya.
ODINGA: Dowladdu ha sheegto tirada Askarta Kenya ee lagu dilay Soomaaliya
Kenya oo baaraysa Saraakiil dambiyo geystay intii uu socday Howlgalkii Islii
Dowladda Kenya ayaa baariays saraakiil booliiska Kenya ka tirsan oo lagu eedeeyay inay geysteen ku kaceen falal ay ka mid yihiin; baad, jirdil iyo weerarro ula kac ah intii ay socdeen howlgalladii ay ka sameynayeen ciidamada Kenya xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ah xaafad ay dadka Soomaalida ah deggen yihiin.
Qareennada Kenyatta oo Weydiistay ICC in ay Joojiso Dacwooyinka Kenyatta
Qareennada madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa mar kale ka dalbaday maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC inay joojiso dacwadda la xiriirta bani’aadamnimada ee Kenyatta loo haysto.
Mucaaradka Kenya oo ku baaqay in Ciidamada Kenya laga soo saaro Somalia
Hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa ugu baaqay xukuumadda Isniintii shalay inay ciidamada Kenya laga soo saaro Somalia, kaddib markii Al-shabaab ay dalkaas ku qaaday weerarro uu dhiig badan ku daatay.
Kenya oo laga baqayo inay Maanta ka dhacaan Rabshado salka ku haya Siyaasad
WaddankaKenya ayaa laga baqdin qabaa inay ka dhacaan maanta rabshado salka ku haya siyaasad, iyadoo lagu wado inay ka dhigaan dibadbax weyn magaalada Nairobi taageerayaasha xisbiga ODM oo ah xisbiga ugu weyn xisbiyada mucaaradka Kenya.
Al-shabaab oo mar kale weerarro khasaare geystay ku qaadday Dalka Kenya
Ugu yaraan 13-qof ayaa ku geeriyooday weerarro kale oo xalay ka dhacay gudaha dalka Kenya, iyadoo mid ka mid ah weerarradaas uu ka dhacay Jasiiradda Lamu.
Somali ku xiran Garoonka Kasarani ee Nairobi oo ka cabanaya Nolol Xumo
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xiran garoonka kubadda cagta Kasarani ee Nairobi ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo xabsiga ku haysta, iyagoo sheegay inay ilaalada garoonkaas ay mar walba garaacaan.
Maxkamadda Sare ee Kenya oo ogolaatay in Qoxootigu ku laabtaan Xeryaha
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa diidday dacwad looga doodayay inuu sharciga waafaqsanaa go'aankii wasiirka arrimaha gudaha Kenya, Joseph Ole Lenku uu ku amray in qaxootiga jooga Kenya ay dib ugu laabtaan xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma.
Booliiska dalka Kenya ayaa toogasho ku dilay 1,000 ruux muddo shan sano ah gudahood, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray urur madax-bannaan oo ka shaqeeya caafimaadka kana howlgala dalka Kenya.
Ra’iisul Wasaaraha oo xalay la kulmay Soomaalida ku nool Kenya (SAWIRRO)
Ra’iisul wasaaraha Somalia, C/weli Sh. Axmed Maxamed oo maalmahan safar shaqo ku joogay dalka Kenya ayaa caawa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Kenya.
Kenya oo shaacisay inay ciidamadeedu toogteen Xubno ka tirsan Al-shabaab
Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay inay shan ruux oo ka tirsn Al-shabaab ay toogasho ku dileen, kuwaasoo ay xuseen inay ka tirsanaayeen kooxihii weerarka khasaaraha badan dhaliyay ku qaaday deegaanka Mpeketoni ee dalka Kenya.
Al-Shabaab oo mar kale Weerar qasaaro sababay ku qaadaygudaha wadanka Kenya
Wararka laga helayo deegaanka Mpekoni ee ka tirsan Magaalada Lamu ayaa sheegaya in xalay dagaalyahano Hubaysan oo Shabaab ka tirsan ay markale weerareen Xaafado hoos yimaada degaanka Mpekoni oo 30 km u jira Magalada Lamu ee dalxiiska loo tago halkaasna ay ku dileen 10 qof.
Ganacsatada Eastleigh ee magaalada Nairobi oo wadamo kale ganacsigoodii u wareejiyay
Maalgeliyaasha xaafada Eastleigh ayaa bilaabay in ay u wareejiyaan ganacsigooda wadamo kale kadib markii uu saameyn ku yeeshay raafkii ka dhacay magaalada Nairobi.
Kooxo Islaamiyiin ah oo 48-qof ku dilay Weerar ay ku qaadeen dalka Kenya
Ugu yaraan 48-qof ayaa lagu dilay, 80-qof oo kalena waa lagu dhaawacay kaddib weerar ay kooxo Islaamiyiin ah oo wata calan madow ku qaadeen magaalada Mpeketoni oo ka mid ah deegaannada loo dalxiis tago ee ku yaalla xeebaha Kenya.
Hoos u dhac weyn oo ku yimid Dalxiiskii dalka Kenya
Iyadoo ay sii kordheyso amni darada ka jirta gudaha dalka Kenya ayaa waxaa hoos u dhac weyn ku yimid dalxiiskii dalkaas loo imaan jiray oo ahaa qeyb ahaan dhaqaalaha faraha badan ee ka soo geli jiray.
Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay Magaalada Mombassa ee Dalka Kenya
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya Magaalada Mombassa ee Dalka Kenya ayaa waxay sheegayaan in Xalay qarax uu ka dhacay magaaladaasi.
Kenya oo ka Jawaabtay Digniinihii ay soo saareen Mareykanka iyo Ingiriiska
Xukuumadda Kenya ayaa jawaab deg-deg ah ka bixisay digniin ay soo saareen dalalka Mareykanka iyo ay Ingiriiska, taaaso ahayd in falal argagaxiso ay ka dhici karaan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Mombasa.
Maxkamada Sare ee Kenya oo diiday in Somalida xoog loogu celiyo Xeryaha Qaxootiga
Iyadoo dadka Somalida ah ee lagu soo qab qabtay howlgalada Ciidamada Kenya ay ka sameynayaan Gudaha wadaankaasi dadka la soo qab qabtayna qaar kood loo soo tarxiilay Somalia halka qaarkoodna la geeyay xiryaha Qaxootiga ee dalka Kenya.
Kenya oo laba Ruux oo Soomaali ah u xirtay Qaraxyadii ka dhacay Mombasa
Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa shalay oo Salaaso ahayd amartay in laba ruux oo Soomaali ah oo lagu hayo xabsiga muddo 10-maalmood ah, iyadoo labada qof loo haysto qaraxyo mataano ahaa oo toddobaadkan ka dhacay magaalada Mombasa kuwaas oo dilay afar qof.
Wasii sii kordhaayo Qasaaraha ka dhashay Qaraxyo xalay ka dhacay kenya
Faah faahin ayaa ka soo baxeysa qaraxyo xalay ruxay bartamaha magaalada Nairobi, kadib markii labo bas oo kuwa dadweynaha ay raacaan la qarxiyay.
Xisbiga ODM oo ku baaqay in Ciidamada Kenya laga soo saaro Soomaaliya, si loo bad baadiyo...
Xisbiga Mucaaradka dalka Kenya ee ODM ayaa ku baqay in laga soo saaro ciidamada ku sugan Soomaaliya, si loo bad baadiyo nolosha dadka Kenyanka ah.
Raila Odinga “Beegsiga Somalida ku nool Kenya waxaan u arkaa Dhaqan Gumeysi ah
Ra’iisalwasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga oo wareysi siiyey idaacada VOA-da Laanteeda Afka Somaliga ayuu ka hadlay dhibaatooyinka ciidanka Kenya ka geysanayaan magaalooyin katisan dalkaasi.
Kenya oo qunsul u soo magacawday Kismaayo iyo Axmed Madoobe oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in qunsul ay Kenya u soo magacawday magaaladaas uu waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay Hogaamiyaha Maamulka KMG ah ee Juba Axmed Madoobe.
Booliiska Kenya oo xiray sadax Soomaali ah oo loo heesto qaraxyaii ka dhacay Saldhiga Bangani(Aqriso Magacyadooda)
Sadax qof oo Soomaali ah ayaa loo xiray ku lug lahaanshaha Weerar gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay loo adeegsaday oo habeeno kahor ka dhacay afaafka hore Saldhiga Ciidanka Booliiska Bangani ee Magaalada Nairobi Dalka Kenya.
Sacuudiyaan Al Shabaabka Somaliya xiriir la leh oo lagu xiray dalka Kenya
Sida lagu qorey jariidada The Star ee kasoo baxda dalka Kenya ayaa lagu qorey in booliska dalka Kenya ay gacanta kusoo dhigeen muwadin Saudi Arabian ah oo lagu magacaabo Axmed Hanas oo ku sugnaa xadka ay wadaagan Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan magaala xeebedka Lamu,sida ay booliska ay sheegen waxa uu doonayay in uu kusoo biiro dhaq dhaqaaqa Al-shabaab.
Qarax dhimasho Sababay oo Xalay ka dhacay Saldhigga Pangani ee Nairobi
KAfar qof oo laba ka mid ah ay yihiin booliis ayaa ku dhintay qarax xalay ka dhacay saldhigga booliiska Pangani ee xarunta dalka Kenya ee Nairobi, sida ay sheegeen saraakiil u hadlay Kneya, iyadoo qaraxan uu imaanayo xilli ay howlgallo lagu adkeynayo ammaanka ka socdaan Nairobi.
Hogaamiyaasha Muslimiinta dalka Kenya oo si kulul uga hadlay raafka Soomaalida
Hogaamiyaasha Muslimiinta dalka Kenya ayaa cambaareeyay howlgalkii xaafada Islii ee dalka Kenya kaasi oo ay ku sheegeen inuu ahaa mid lagu waxyeelaynayay ganacsiga Soomaalida ee dalka Kenya, kadib markii
Daawo Sawirada “Silica iyo Dhibaatada Heesata Soomaali badan oo ku xir xiran Garoon kuyaala Nairobi
Rail Odinga Oo Dowladda Kenya Ku Dhaliilay Qaabka Ay Ula Dhaqantay Dadka Soomaaliyeed
Ra’iisal wasaarihii hore ee Kenya Rail Odinga ayaa ku dhaliilay dowlada Kenya qaabka ay ula dhaqantay dadka Soomaaliyeed howlgalada ay kula dagaalamayso argagaxisada ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Kenya oo celisay qaxooti Soomaali ah oo maalmihii lasoo dhaafay lagu qabqabtay howl-gal ka dhacay islii
Siddeetan iyo labo qof oo Soomaali ah oo ka tirsan dadkii lagu qabqabtay howlgallada ay ciidamada Kenya ka wadaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayay maanta diyaaraddii wadday ka duushay Nairobi iyadoo ku sii jeedda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Kumannaan ruux oo Soomaali ah ayaa lagu hayaa garoonka kubadda cagta ee Kasarani oo ku yaalla magaalada Nairobi, kuwaasoo laga soo qabqabtay xaafadda Islii oo ay daggan yihiin Soomaalida.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay Soomaalida Kenya ku nool in ay ka qeebqataan ilaalinta Amaanka dalkaasi.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Kigali ee xarunta dalka Ruwanda ayaa Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula taliyay inay ciidamada amniga kala shaqeeyaan sugidda ammaanka.
Sooomaalida aan shaciga ku lahayn Kenya oo lagu soo celinayo Soomaaliya
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Maxamed Cali Nuur Ameerika, ayaa sheegay in Soomaalida aan haysan dhalashada dalka Kenya ama aan lahayn sharci ay ku deggen yihiin dalka Kenya, waxaa dib loogu celinayaan dalkoodii Soomaaliya.
Culummada Kenya oo Dalbaday in la sheego kooxihii dilay Sheekh Makaburi
Hoggaanka muslimiita dalka Kenya ayaa ka dlabaday dowladda inay gacanta kusoo dhigto raggii dilay Sh. Abuubakar Shariif Axmed oo habeen hore lagu toogtay gudaha magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
Mid kamid ah Wadaada sida weyn u taageera Al-Shabaab oo lagu xiray Magaalada Nairobi
Wararka aan ka heleyno Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya ayaa sheegaya in Ciidamada amaanka Dalkaasi ay xabsiga dhigeen mid kamidah Wadaada Soomaaliyeed ee sida weyn u taageera Xarakada Al-Shabaab.
In ka badan 600-ruux oo lagu qab qabtay howl galo saacadihii la soo dhaafay laga sameeyay Xaafada Islii
Ciidamada ammaanka Kenya ayaa saacadihii la soo dhaafay howl galo ballaaran ay ka sameeyeen Xaafada Islii ee Magaalada Nairobi waxay ku qab qabteen in ka badan lix boqol oo ruux, kadib markii looga shakiyay inay lug lahaayeen qaraxyadii xalay ka dhacay Xaafadaas
Dad kabadan Kun qof oo ciidanka Kenya Xabsiga dhigeen (Somali ayaa ku jirta dadka la xiray)
Saacado yar kadib markii ay wasarada arimaha guadaha Kenya ay amar ku bixisay in qaxootida Soomalida ah ay dib ugu laabtaan xerooyinkii ay ku jireen ayaa booliska dalkasi waxa ay gacanta kusoo dhigeen in kabadan 1000-qof oo ay u badan yihiin qaxooti Somalia ah oo iyagu ku sugnaa magaalada Nairobi.
Dawlada Kenya oo dawlada Somaliya ka dalbatay inay soo dirsato gudigii Qaxootiga urari lahaa
Sagal Radio Services • February 11, 2014
Wasiirka arimaha gudaha dalka Kenya Joseph ole Lenku ayaa ugu baaqay dowladda Somalia in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo magacowdo gudiga ugu qaabilsanaan doona soo daabulida qaxootiga Soomaalida eek u xugan xeryaha qaxootiga dalkaasi.
Ciidamada dalka Kenya ayaa gelinkii dambe ee shalay oo Sabti ahayd ku qabtay meel u dhow magaalada Mandheera, saddex nin oo looga shekisan yahay inay ka tirsan yihiin Ururka Al-shabaab.
KENYA: Sagaal qof oo loo Qab-qabtay Dukumiintiyo la been abuuray
Booliiska Kenya ayaa Arbacadii ku qabtay garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta (JKIA) sagaal qof oo ay Soomaali, booliis iyo shaqaale diyaaradeed ku jiraan, kuwaasoo lagu tuhmay inay ku lug leeyihiin kooxaha sameeya baasaboorrada iyo fiisooyinka been-abuurka ah.
SOOMAALI MAANTA MAXKAMADA LAGU SOO TAAGAYO DALKA KENYA
21 kii September Sanadkii 2013 waxay aheyd maalinti uu dhacay weerarkii Westgate ee magaalada Nairobi waxaana maalintii dhismahaasi oo ka koobnaa afar qeybood la wareegay kooxo hubeysan oo ka tirsanaa Alshabaab, iyadoo ku dilay goobta 67 ruux.
Dab Ka Kacay Xerada Ifo Ee Dalka Kenya
Dab xoogani ee xalay ka kacay xerada qaxootiga Ifo ee dalka Kenya iyadoo khasaara xoog leh uu ka soo gaaray dabkaasi dad badan Soomaali ah oo qaxooti ku ah xeradaasi, waxaana la sheegay in dabka uu ka kacay bartamaha suuqa xeradaasi gaar ahaan suuqa xoolaha lagu iibiyo.
Soomaalida oo horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ka gaaray dalka Kenya
Sagal Radio Services • News Report • December 29, 2013
Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya ayaa gaartay horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah sannadihii ugu dambeeyay sida uu qoray wargeyska The Standard oo kamid ah wargeysyada ugu afka dheer Kenya.
Kenya oo si rasmi ah u shaacisay Ogolaanshaha Baasaboorka Somalia
War kasoo baxay Dowladda Kenya, ayaa lagu sheegay inay aqoonsan doonto Baasaboorka Cusub ee Somalia.
Milateriga Kenya oo sheegay inay Qorsheynayaan duqeymo cusub oo ay ku Qaadaan Saldhigyada iyo Baraha Al-shabaab
Jimco, November 08, 2013)-Milateriga Kenya ayaa shacabka ku nool Koonfurta Soomaaliya ugu baaqay inay ka fogaadaan saldhigyada kooxda Al-shabaab ay leedahay iyo baraha koontaroollada ah ee ay ciidamadooda kaga sugan yihiin Kooonfurt Soomaaliya.
Afar ruux lala xiriiriyay weerarkii Westgate ee magaalada Nairobi oo Maxkamad la soo taagay
Eedeysanayaashan ayaa loo heystaa inay ku lug lahaayeen weerarkii Xarunta Ganacsiga Westgate lagu qaaday bishii September, taasoo ay ku dhinteen in ka badan 60 ruux.